Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » A malitere njem nlegharị anya mpaghara mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
N'okpuru usoro njem nlegharị anya mpaghara EAC, mkpọsa ahụ ga -akwalite ngwugwu ndị njem dị iche iche n'ime mpaghara na -ezubere mba ise so na Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya na Rwanda.
A malitere mkpọsa ikpo okwu maka njem nlegharị anya mpaghara maka ụmụ amaala East Africa.
Ebumnuche mgbasa ozi "Gaa n'ụlọ" ma ọ bụ Tembea Nyumbani iji kpalie ụmụ amaala East Africa ileta ibe ha.
Mgbasa ozi a bu n'obi ịkwalite azụmahịa ndị njem na mpaghara ahụ site na igosipụta ọtụtụ akụ njem nlegharị anya zoro ezo na ngwugwu ezumike na -atọ ụtọ.
N'ihu ihe ngosi ngosi njem nlegharị anya mpaghara izizi nke mba ndị otu haziri Obodo Ọwụwa Anyanwụ Africa (EAC), amalitela mkpọsa mkpọsa njem iji kpalie njem mpaghara n'etiti mba ndị otu.
Emepụtara ya n'oge na-adịbeghị anya, mgbasa ozi ọnwa atọ gara aga "Nleta ụlọ" ma ọ bụ Tembea Nyumbani bụ ebumnuche ịkwalite ụmụ amaala East Africa ịga leta ibe ha n'etiti mba ndị otu dị iche iche na mbọ iji kwalite azụmaahịa ime obodo na mpaghara n'ime mgbochi EAC.
Mgbasa ozi a bu n'obi ịkwalite azụmahịa ndị njem na mpaghara ahụ site na igosipụta ọtụtụ akụ njem nlegharị anya zoro ezo na ọnụ ahịa ezumike na -atọ ụtọ nke enwere ike inyocha n'okpuru mmụọ nke ebe anwansi Africa.
Mgbasa ozi a na -ezipụta ozi na "obodo ọ bụla dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Afrịka ị na -aga, bụ ụlọ na -anọghị n'ụlọ" iji dọta ụmụ amaala mpaghara ịga leta ebe nkiri dị na steeti ọ bụla.
A na -atụkwa anya na ọ ga -eme ka ndị bi na EAC nwekwuo mmasị ime njem n'ime mpaghara ahụ wee tụgharịa ụlọ ọrụ njem, nke bụ ụzọ ndụ maka ọtụtụ nde mmadụ nọ na East Africa.